Myat Shu - သူတို့အာဘော်
You are here : Myat Shu » Archives for သူတို့အာဘော်
Published By Myat Shu On Thursday, July 4th 2013. Under Myat Shu eZine, မျက်ရှု, သူတို့အာဘော်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လတ်တလော ဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေအရ ဦးဝီရသူကို ဖမ်းလိုက်ရင် မုန်းတီးရေးတရားတွေ ကွယ်သွားမလားလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ မကွယ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူဟာ အခု ဖြစ်နေတဲ့ မွတ်စလင်မုန်းတီးရေး လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပြယုဂ်တစ်ခုသာလျှင်ဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဒီပြယုဂ်ကို အမှီပြုပြီး နောက်ဆက်တွဲရလဒ်တွေကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်။ ဖြစ်တတ်တာကတော့ ပြယုဂ်တစ်ခုရဲ့ နာမည် အရမ်းတက်လာပြီဆိုရင် အဲဒီ ပြယုဂ် ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပြဿနာရဲ့ အတိမ်အနက်၊ ဇာစ်မြစ် စတာတွေဟာ ကွယ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဖြေရှင်းနည်းကို စဉ်းစားရာမှာလည်း အဲဒီ အရင်းခံအကြောင်းတွေကို ဖယ်ဖို့ မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီကြားထဲ နာမည်ယူချင်တဲ့ သူတွေ ကလည်း ဒီပြယုဂ်ကိုသုံးပြီး နာမည်ယူသွားနိုင်ပါသေးတယ်။ ဦးဝီရသူဟာ သူကိုယ်တိုင် ဒီအမုန်းတရားတွေကို နှစ်နှစ်ကာကာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်လို့ဆိုတာ ငြင်းစရာ မရှိပါဘူး။ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Monday, May 6th 2013. Under မျက်ရှု, သူတို့အာဘော်
ယခုအခါ အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ခေတ်ပညာတတ်အမျိုးသမီးများအပေါ်တွင် အထင်သေးအမြင်သေး ဖြစ်နေကြသည်များကို တွေ့ရ၏။ များစွာသော ယောက်ျားတို့သည် ပညာတတ် မိန်းကလေးများကို လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန် အလိုမရှိကြချေ။ “ပညာတတ်မိန်းမတွေဟာ မိန်းမ မပြီသဘူး။ ကိုယ့်ကိုအလှပြင်ဘို့လောက်သာ ဂရုစိုက်နေကြတဲ့ ဘော်ကြော့မ ပျံလွှားမတွေပဲ။ ချက်မှုပြုတ်မှု အိမ်ထောင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုတဲ့ မိန်းမတို့ သိအပ်တဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေဆိုတာ လုံးဝ မသိနားမလည်ကြသည့်အပြင် “ငါ ပညာတတ်ဟဲ့” ဆိုတဲ့ မာနဂုဏ်မောက်ပြီး ယောက်ျားတွေကို ပြန်အံတုနေကြမှာနဲ့ တို့တွေ ဘယ်တော့မှ ကျွန်တွင်းက တက်မှာမဟုတ်ဘူး စသည်ဖြင့် တဘက်သတ် အယူသီးပြီးလျှင် ပညာတတ် အမျိုးသမီးများကို ကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချလေ့ရှိသော ယောက်ျားများကား အသင်္ချေနှင့် အနန္တပင်တည်း။ ပညာတတ်ခြင်းနှင့်မဆိုင် စင်စစ် “မိန်းမ မပြီသဘူး၊ ပြီသတယ်၊ အိမ်တွင်းမှု တတ်တယ်၊ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Monday, October 17th 2011. Under သူတို့အာဘော်
ကျုပ်က ကျောင်းဆရာလေဗျာ။ ၁၉၆၀ က ၁၉၆၇ ထိ ၇ နှစ်လုပ်သက်ရ ဆရာ။ ၁၉၆၇ ခု၊ စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့ကျတော့ ကျောင်းဆရာဘ၀က စုတေစိတ်ကျခဲ့ပါရော။ ခပ်ခန့်ခန့် ပြောရရင် ကျောင်းဆရာပြုတ်။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်ကိုယ်မှာ ကျောင်းဆရာစော်နံတုန်း။ ဒါ ဆရာငြိမ်း အမှတ်တရ။ ကြားဖူးတယ်နော် “မယ်စကြာဝဠာစော်နံတယ်”။ ကျောင်းဆရာရဲ့ ဆောင်ပုဒ်က မပြင်ဘဲ မသင်နဲ့ အင်္ဂလိပ်လို ပြောရရင် Don’t teach without preparation ကျုပ်အသက် ၇၆။ ရတနာသုံးပါး ဦးထိပ်ထားသူ၊ အပ္ပမာဒ တရားကို နှလုံးသွင်းသူ။ အသက် ၆၀ကျော်ပြီဆိုကတည်းက မပြင်ဘဲ မသေနဲ့၊ Don’t die without preparation ... Continue Reading
လက်ရှိအစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးမှုရလဒ်များအရ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် အပြောင်းအလဲကို လိုလားနေသည်၊ အပြောင်းအလဲကို ရှေးရှုနေသည်ဟူ၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ရည်ညွှန်းပြောဆိုလျက်ရှိရာ ထိုမှတ်ချက်များ အပေါ် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အမြင်များကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ (၂)၊ အမှတ် ၆၂ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤစာစုတွင် နိုင်ငံရေးနှင့် စာနယ်ဇင်း ပုဂ္ဂိုလ်အချို့၏ ဖြေကြားချက်များနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အင်တာဗျူးတို့မှ ကောက်နုတ်၍ မျက်ရှုမှ ပြန်လည် ဖော်ပြလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဦးအုန်းကြိုင် (မှတ်ပုံတင်ခြင်း မပြုလုပ်ရသေးသော NLD ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ) ကောင်းပါတယ်။ အဲဒါ အမှန်ပဲ။ အခု ... Continue Reading